शाह वंश Info. About. What's This?
ⓘ शाह वंश
शाह वंश नेपाल राजतन्त्रका प्रशासक थिए । राजा रामशाहको पालामा लेखिएको गोरखा राजवंशावलीले कुनै ठोस आधार पुष्ट्याउँदैन्। प्रचलित वर्णन काल्पनिक हुनसक्ने प्रबल सम्भावना छ । प्रचलित वर्णनका आधारमा शाह वंशका पूर्खाहरू भारतको चितौडबाट मुश्लिम आक्रमणबाट बच्न नेपाल पसेका भूपाल राणाजी राव तथा उनका छोराहरू हरिहरसिंह र अजयसिंह थिए । तर चितौडगढका गुहिलवंशी सिसोदिया राजाहरूको वैशमपायन गोत्र हो भने नेपालका शाहवंशको पुरानो गोत्र भारद्वाज गोत्र हो। त्यस्तै उक्त वर्णन अनुसार चितौडगढका सूर्यावंशी राजा भट्टारक ऋषिराज राणाजीको ३३ औँ वंशका राजा भूपति राणाजीका उदयरस, फत्तेसिंह र मनमथ नाम गरेका तीन छोराहरू थिए। फत्तेसिंहकी छोरी अत्यन्त रूपवती थिइन्। उनलाई हरण गर्ने उद्देश्य लिएर मुसलमानहरूले चितोरगढ आक्रमण गरे । मुसलमानहरूले फत्तेसिंहकी सुन्दरी कन्याका लागि चितोरगढलाई ध्वस्त पारिदिएपछि केवल मनमथ नै जीवित रहे र उज्जैनमा शरण लिई ज्यान जोगाए । त्यहाँ उनका ब्राह्मणिक र भूपाल नाम गरेका दुई पुत्रहरू जन्मिए । पुत्रहरूका बीचमा आपसी मेल नभएका कारणले भट्किएका भूपाल मुसलमानहरूका डरले उत्तरतर्फ पार्वत्य अञ्चलमा प्र...
1. राज्य विस्तार
यशोब्रम्ह शाहका कान्छा छोरा द्रव्य शाहले सन् १५५८ मा गोर्खा, लिगलिगकोटका घले राजवंशलाई समाप्त गरी पूर्वतर्फ शाहवंशीय राज्यविस्तारको वीजरोपण गर्दै सन् १५५९ मा विसं १६१६ गोर्खा राज्यको स्थापना गरेका थिए । तत्कालीन अवस्थामा लिगलिग भन्ने ठाउँमा घलेहरूले राज्य गर्दथे । त्यहाँ प्रत्येक वर्ष विजयादशमिका दिन दौडमा प्रथम हुनेलाई राजा बनाउने प्रचलन थियो । त्यस उत्सवलाई हेर्न उपस्थित भएको बेला द्रव्य शाहले अप्रयाशित रूपमा आक्रमण गरी त्यहाँ आफ्नो प्रभुत्व कायम गरे । लिगलिगकोट माथि विजय भएपछि तुरुन्तै गोरखा आक्रमण गरी १५ दिनसम्म युद्ध भएकोमा गोरखा विजय हुन सकेन । द्रव्य शाह निकै महत्त्वाकांक्षी भएकोले प्रथम पराजयले उनलाई खासै असर पारेको थिएन । भागिरथ पन्त, गणेश पाण्डे, सर्वेश्वर अनाल गङ्गाराम राना, गजानन भट्टराई, केशव बोहोरा, मुरली खवासहरूले उनको उत्साहलाई बढाईरहेका थिए । द्रव्य शाहका सैनिकहरू, थापा, भुसाल, मास्के, रानाहरू समेतले गोरखाका राजाको दरबारलाई घेरी आक्रमण गरे । द्रव्य शाहको हतियारबाट खड्का राजाले विरगति प्राप्त गरे यसप्रकार विसं १६१६ भाद्रमा द्रव्य शाह गोरखाका राजा भए ।
2.1. नेपाल एकिकरण नुवाकोट
2.2. नेपाल एकिकरण उपत्यका
भक्तपुर गोर्खाको मितेरी सम्बन्धमा गाँसिएको राज्य थियो। पाटन अस्थिर राजनीतिका कारण कमजोर राज्य थियो। तसर्थ काठमाडौँ उपत्यका माथिको विजय प्रकाश मल्लमाथिको विजयमा निर्भर थियो। काठमाडौँलाई सिधै आक्रमण गर्नु मूर्खता ठान्ने गोर्खाका नवराजाले काठमाडौँ वरिपरिका राज्य र क्षेत्रहरूलाई कब्जा गरे सन् १७४६ मा। एउटा लामो सान्नाटा पछि गोर्खाले अचानक १७५७ मे २८मा कीर्तिपुर आक्रमण गरे। यस युद्धमा पृथ्वीनारायण शाहलाई जय प्रकाश मल्लले जिते। किनकि युद्ध निति जय प्रकाश मल्लको थियो। उनले उपत्यकाका राज्यहरूका सैनिक एकता गरी गोर्खा विरुद्ध युद्ध लडे। पाटन राज्यको अधिनस्थ राज्य कीर्तिपुर सेप्टेम्बर २६, १७६४को युद्धमा पनि विजयी बने। १७६४ ताका उपत्यकाका राज्यहरूको स्थिति १७५७ तिर जस्तो थिएन। राज्यहरू वीच मतभेत विद्यमान थियो। वास्तवमा आपसि फूट र अदुरदर्शिता नै मल्ल वंशको पतनको मूल कारण बन्यो। १७६५मा गोर्खाले कीर्तिपुर लियो। पृथ्वीनारायण शाहको मूल निशाना बाँकी नै थियो। एकातर्फ सन् १७६८ सेप्टेम्बर २५ का दिन इन्द्र जात्राको भोजसंगै काठमाडौँ उपत्यकाकै सबै भन्दा शक्तिशाली राज्यको अन्त भयो भने अर्को तर्फ विशाल नेपालका निम्ति शाहवंशीय राज्यसत्ताको उदय भयो। त्यसपछि अक्टोबर ६, १७६८ मा पाटन र नोवेम्बर १३, १७६९ मा मितेरी सम्बन्धको अन्त गर्दै भक्तपुरमाथि सहज जित हासिले गरे। काठमाडौँमा हारेका जय प्रकाश पाटनमा हारे अनि अन्तमा भक्तपुर राज्यसंगै उनको जीवनको अन्त भयो। भौगोलिक रूपले पृथ्वीनारायण शाहबाट जग बसालिएको नेपाल एकीकरण बहादुर शाह र राजेन्द्र लक्ष्मीले सम्पन्न gareka thie । तैपनि नेपालको मानाचित्र जंग बहादुर राणाको समयसम्म फेरबदल भइरह्यो। सन् १८१६ को सुगौली सन्धिले १/३ नेपाली भूभागलाई भारतमा मिलायो। जंग बहादुर राणाको नेतृत्वमा १८५७को भारतको सिपाही विद्रोहमा नेपाली जनताले दिएको पसिना रगतको मोल स्वरूप कैलाली, कंचनपुर, दाङ, देउखुरी नेपाललाई फिर्ता भयो। तब बर्तमान नेपालको मानाचित्र १८१६ को हार १८५७ को विजयले कोरेको देखिन्छ।
3. एकिकरण पश्चातको नेपाल
Wikipedia: शाह वंश